Sandals Emerald Bay inovhura zvakare madhoo ayo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Sandals Emerald Bay inovhura zvakare madhoo ayo
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Shangu Emerald Bay
Sandals Emerald Bay, Gorofu, Tennis & Spa Resort muGreat Exuma, Bahamas, yakavhura zviri pamutemo magonhi ayo nhasi, ichitambira vaenzi vachidzoka nehushamwari hweBahamian uye inovandudza hutano uye nzira dzekuchengetedza panzvimbo yekuvimbisa rugare rwevafambi nepfungwa Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana. Sandals Emerald Bay, ine yakasarudzika musanganiswa wehunyanzvi uye kuvharika, inoratidza 11th Sandals Resort parizvino yakavhurirwa vashanyi kuti vapinde munzvimbo inoyevedza inobvumidza vakaroora kuti vatarise pane izvo zvakakosha - mumwe nemumwe.
"Sandals Emerald Bay kutiza kwechokwadi, uye timu yedu haina kugadzirira kugamuchira vashanyi vedu vanodiwa kudzoka kumba kuparadhiso," akadaro Adam Stewart, Executive Chairman weSandals Resorts International. "Tiri kukwazisa vaenzi vedu neiyo nyeredzi shanu-sevhisi yavari kutarisira kutarisira nekuvharana neumbozha hwavanga vachishuwira, kunyudzwa munzvimbo ine rudo."
Iyo nzvimbo yekutandarira ine 18-hole, 7,001 yadhi, par-72 mukwikwidzi gorofu yakagadzirirwa neWorld Golf Hall of Famer uye mumiriri we brand, Greg Norman. Greg "Iyo Shark" ichabatsira kudzikisira iyo yekuvhurazve mhemberero nhasi nekutora iyo @SandalsResorts Instagram ine "Ndibvunze Chero Chinhu" nyaya Q&A chikamu.
Yakareba mazana mashanu mahekita ane 500 makamuri uye masuti, Sandals Emerald Bay inozvirumbidza nzvimbo dzakasiyana-siyana dzemahara dzevakaroora kuti vadzorezve kudanana kwavo uye kumutsidzira rudo rwavo nedzimba dzekugara dzakanaka uye sevhisi-yakasarudzika sevhisi pamatanho ese. Vakaroorana vanogona kunakidzwa nekushushikana-kusununguka zvese-zvinosanganisira zororo vachiziva kuti vachasangana neSandals Platinamu MaProtocol eUtsanana kubva panguva yavanosvika, uye kuburikidza neese pa-resort chiitiko, kusanganisira kupfuura anopfuura gumi nematanhatu akakosha ekubata.
Vashanyi vanobhuka rwendo rwavo runotevera kuSandals Emerald Bay vanogona kuzviita nechivimbo kuburikidza neSandals Resorts ' 'Bhuku uine Ruvimbo' chirongwa uye Kufamba Kudzivirirwa Chirongwa Inishuwarenzi, yakatengwa pachinzvimbo chevaenzi, uye ichangobva kuwedzerwa kumabhuka ese akaitwa izvozvi kusvika Nyamavhuvhu 31, 2021. Uyezve, iyo Luxury Inosanganisirwa® kambani yekutandarira ikozvino inopa kuyamura COVID-19 kuyedza pa-nzvimbo yekutenderera nendege kudzokera kuUS, Canada, uye United Kingdom nekuda kweCDC nyowani inodikanwa, mukuyedza kuita kuti ruzivo rwekuzorora rwusaname sezvinobvira.
Inowanikwa muGreat Exuma, Iyo Bahamas, Sandals Emerald Bay inogara yakanangana neyakajeka mamaira-machena-jecha pamhenderekedzo, yakatenderedzwa nemvura ye-turquoise yakakwana yekutsvaga kwemvura pasi pemvura kana kuyangarara newaunoda - sarudzo ndeyako. Sandals Emerald Bay inogarawo kune 11 5-Star Global Gourmet sarudzo dzekudyira, inoshamisira 29,000 sq. Ft. Red Lane® Spa yekumhanyisa wega, madziva emvura matsva matatu anosanganisira dziva reCaribbean rakakura kwazvo rekupinda zero, yepasi rose 150- slip marina, uye isina muganho ivhu uye mvura mitambo inosanganisira kudhiraivha kwezuva nezuva kune akasiyana akasimbiswa uye Greg Norman-yakagadzirirwa 18-hole, par 72 mukwikwidzi gorofu, inozivikanwa seimwe yenzvimbo dzinoyevedza yegungwa-parutivi gorofu muCaribbean.
Kuti uwane rumwe ruzivo kana kubhuka yako inotevera Luxury Inosanganisira® zororo kuSandals Emerald Bay, ndapota shanya www.mumusi.com.